Travel World: September 2011
Boeing delivers 787 Dreamliner to All Nippon Airways after long delay
Bubble Hotel in France offers great view of the night skies
Unique Travel Adventure: Man uses helium balloons to to cross the Alps
Posted: 30 Sep 2011 12:11 AM PDT
Aircraft manufacturer Boeing hands over the 787 Dreamliner to All Nippon Airways of Japan this week after three long years of delay. The delivery of the lightweight and fuel efficient jet took place...
Posted: 30 Sep 2011 12:05 AM PDT
Just outside of Paris,aunique hotel gives locals and touristsachance to getagood night’s rest while watching the stars. Bubble Tree Hotel was designed by Pierre-Stephane Dumas who...
Posted: 30 Sep 2011 12:01 AM PDT
Jonathan Trappe, an American adventurer, surely was inspired by Pixar’s creation Up and picked helium balloons to fly over the Alps. Recently the adventurer from North Carolina tiedachair to...
The Wizarding World of Harry Potter might haveacompetition as the set of the movie Avatar is also heading to Florida. James Cameron is collaborating with Walt Disney World to bring Avatar to add ti...
Posted by Travel at 6:20 PM0comments
လေးစားထိုက်သူအားလုံးကို အလေးအနက် လေးစားဦးညွှတ်ခြင်း။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်လိုက်တဲ့ သတင်းကို အတိုင်းမသိဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စ အောင်မြင်တာ ပြည်သူကိုယ်စားပြုသောဂျာနယ်များနှင့်
နိုင်ငံခြားသားတွေမြန်မာပြည်ကို သိနေတဲ့နေရာများမှာ ပုဂံ၊အင်းလေး၊
ကျွန်မတို့ Tourism အသက်သွေးကြော ဧရာဝတီကယ်တင်ရေးအတွက်
စွမ်းစွမ်းတမံပါဝင်ခဲ့ကြသော လေးစားထိုက်သူအားလုံးကို အလေးအနက်
Posted by Travel at 6:19 PM0comments
Posted: 30 Sep 2011 08:25 AM PDT
After weeks of hyperactive travel, I’m resting in Salzburg, Austria. It’sabeautiful city with some beautiful mountains asabackdrop. My plan is to simply relax while I am here and recover. I’ll doabit of sightseeing but afterawhirlwind3weeks between Mexico, Germany, and far too many beers at Oktoberfest, I really just want to doalot of nothing. I haven’t felt like I’ve had anytime to myself lately and sometimes you just needabit of alone time to decompress. Moreover, I’m very behind on my writing as well as making improvements to this site.
And so it’s time to sit down, relax, sleep, and do some work. I have dozens of articles floating in my head that I want to write and put out there.
And just like I did last year, as I sit down and work on improving this website, I would love your feedback on the site and the content. I want to make sure that you are getting the budget tips you want and would love to know what brings you back to this site, what you like, don’t like, etc.
I createdashort survey that you can fill out. It’s5questions long and will take about 1 minute to do. Click the link below to fill it out:
Or, you can simply leaveacomment below giving me feedback on the site. Tell me what I can do to help you travel better and make this site more useful for you.
Posted by Travel at 5:41 PM0comments
Android/Mobile Application Sr Developer @ Bedminster, NJ
Title : Android/Mobile Application Sr Developer
Rate : $45/hr
Android/Mobile Application Sr Developer ?
Rate ? $45/hr
· Solid hard core experience in J2EE / Android Mobile Architecture / Solution of Mobile Technologies / Mobile Middleware embedded / Web & Mobile applications
· Having 5-10 years experience in any of the technologies - J2EE / Android
· Experiences in OOPS, UML, Design patterns and frameworks, should be able to suggest Architecture changes with customer
· Experience in Spring, Struts 2, and Hibernate, Eclipse IDE & Development
· Hands on experience preferred
· Sun Java Certified programmers are preferred.
Posted by Travel at 1:42 PM0comments
Sr Performance Tester @ beaverton,OR
Title : Sr Performance Tester
Location : beaverton,OR
Test Engineer Performance-L2.2: - LoadRunner scripting (webservices + web http protocols) and execution (must-have skill) - Performance testing concepts (must-have skill) - Good communication skills
Posted by Travel at 1:06 PM0comments
Performance Test Lead @ Pittsburgh, PA
Title : Performance Test Lead
· 6+ years experience in Load runner or Silk performer or Rational Performance testing
· Must have lead experience
· Experience in performance and scalability testing
· Strong background in database testing and performance tuning
Posted by Travel at 12:54 PM0comments
Posted: 29 Sep 2011 09:22 PM PDT
The tangled maze of aquamarine waterways and tiny islands makes the Marlborough Sounds, gateway to New Zealand's South Island one of the most idyllic and rewarding island passages anywhere in the world. Verdant green land and glistening blue-green waters combine forajourney of visual splendour. Whileanumber of options are available to experience this marine travel wonder, the Interislander...
SAP Portal Developer Beaverton,OR
9 months plus likely extension
Netweaver Portal 7.0 core basis support knowledge
ESS/MSS experienceaplus
NWDI and CTS+ experienceaplus
Core Basis ECC knowledge
Base system installation (ECC & Portal) experience
ABAP & Java EHP installation experience
Oracle administration on UNIX
Per the call with the manager they are moving fromalegacy system to SAP HCM. They are looking for someone with SAP HR experience, specifically ESS/MSS. The project is in implementation phase. They haveateam here as well asafew off shore developers. This resource must be available to be on site. In addition to the above, they are looking for someone that has testing and performance review experience. This must beaSr. level resource that has experience leading and driving projects. They also need to have excellent communication skills.
Posted by Travel at 12:16 PM0comments
SAP PI/XI Administrator in Beaverton,OR
SAP PI/XI Administrator
PI/XI maintenance and troubleshooting
Netweaver Development Infrastructure / SLD
Enterprise Portal Administration & Troubleshooting
Netweaver 7.2 or 7.3 experienceaplus
looking foraBasis PI/XI Administrator. They must have Netweaver portal experience which they said those individuals should have the Java J2EE stack. The servers are already set up so this will beaconfiguration/administration role. They are using the latest version of XI and PI is new to them. This person must be an expert in this area.
Posted by Travel at 12:14 PM0comments
perl developer @ NYC
Title : perl developer
The position is for someone to maintain and enhanceautility written in perl that collects and analyses sql statements issued againstasybase server. The sql statements are read from the sybase instance, written to files, parsed byaperlxs-based library and then imported intoadb2 warehouse. The parser isalex/yacc based sql statement parser that is used to break downastatement or set of statements into the component objects which are then recorded in the warehouse for further analysis. Rapid, accurate processing of the sql statement data is important to reduce the intervals between polling the source server and thus minimise the data loss caused by missed sql statement executions.
The person filling the position will need to beaquick self-starter, able to work to tight deadlines, manageaqueue of enhancements and bug fixes held in jira, work closely with application owners and database administrators to understand requirements, and analyse and leverageasignificant existing code base.
- Experience with DBI/DBD for database connectivity
- Experience in building compiled modules for perl using tools such as perlxs C coding Lex/Yacc
- Building complex lex/yacc parsers Sql
- Understanding of basic syntax
- Knowledge of Sybase and/or DB2
- Familiarity with Jira
2 Oracle developers (Wisconsin and West Virginia)
2 Oracle developers
Location: Wisconsin and West Virginia
Duration: through Feb 12
R 11 and 12
Multiple project hands on
Posted by Travel at 10:23 AM0comments
Java Developer in Lowell, AR
4 Mid-Level Java Developers
Status: Citizen, Green Card, EAD or H1 Candidates
· Working on front-end development for new initiatives / projects in the company
· Designs are already complete, so this will be "heads down" coding
· Need resources with good communication skills, that can commit to the3month duration
· Heads down Java Coders
· SQL (need good experience)
· SQL Server and/or DB2 (back-end systems)
· C#.NET (preferred, but not required)
· Transportation / Logistics Experience (preferred, but not required)
Posted by Travel at 9:23 AM0comments
Senior Integration Java Developer in plano,TX (need locals)
Senior Integration Java Developer
Status: Citizen, Green Card, EAD or H1
Duration:6Months (Client plans to renew the contract every6months as long as possible)
Eligibility Requirements and Candidate Submission Instructions
· Candidate must be currently residing AND working in the greater Dallas, TX area in order to be considered.
· Candidate to report to the Plano, TX office.
Integration Services Team:
· Client develops integration components that reside between enterprise applications.
· Team is responsible for the integration develop surrounding the enterprise network provisioning application called MetaSolv TBS (currently an Oracle product).
· Most of the integration is via web-services and some of it is via CORBA interfaces.
· Telecom and network engineering knowledge isabig plus.
· Candidate must have 5+ years of solid Java development experience in back-end and app-to-app integration components, J2EE app server development, Web Services development, and JDBC database development.
· Proficiency with XML required, preferably XML Spy.
· Extensive experience with Eclipse JDE is required.
· Experience with CORBA development
· Knowledge of MetaSolv's TBS application and/or APIs isaplus.
· Candidate must have excellent verbal and written communication skills, and exemplify good teamwork skills foraprofessional working environment.
· The development focus is on integration of large-scale applications for workflow automation.
· A proven track record of working inacomplex, highly integrated environment isamust.
· The ability to respond effectively inafast-paced development/support role isamust.
· Responsibilities include, but are not limited to: analysis, coding, testing, programming, mentoring, technical design, documentation, and expertise with new platforms and development environments.
· Looking forastrong Java, J2EE, Web-Services developer who has experience with web-services, CORBA, and heavy application-to-application integration experience.
· Experience with interfacing Java applications with .Net applications isaplus.
· Developer must be willing to work inarapid development environment.
· Extensive hands-on implementation and administration of application Servers (Tomcat, JBoss) required.
· Candidate should have experience working as part ofateam, working with development teams and QA engineers, as well as experience writing design documentation.
· Candidate must have good Oracle SQL skills.
· Excellent communications skills are alsoarequirement since candidate will interact verbally with many teams.
· App-to-app integration
· WEB-SERVICES integration
· RDBMS, Oracle SQL, Unix, Linux, JDBC
· Eclipse JDE
Posted by Travel at 9:22 AM 1 comments
Re: ပွင့်လင်းရာသီအကြို ဟောစာတမ်း အမှတ် ၂
Your prediction is awesome! I could not find Part (1) and please post that one too.
Looking forward to reading your Part 3.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/s4beGse4Zk4J.
Posted by Travel at 9:02 AM0comments
Share point Administration @ New York City, NY
Title : Share point Administration
Rate : $75-$78 max
1. Install, configure and manage SharePoint Server environment (2007 and 2010).
2. Establish best practices in deploying custom SharePoint features, service packs and solutions - Perform reviews, hot fixes, security updates in accordance with best practices
3. Managing SharePoint site rights and permissions - including access, load and usability issues.
4. Monitoring, troubleshooting and problem resolution of the SharePoint infrastructure and service
5. Implementing systems diagnostic and maintenance tools to ensure the availability and functionality of SharePoint.
6. Supporting the business, along with developers and DBA?s, in deployment of SharePoint related solutions.
7. Assist departmental, group, and project team site owners with SharePoint administration and configuration tasks
8. Provide technical input to assist in the development of plans for projects that intend to use SharePoint asadevelopment platform.
9. Produce and maintain documentation for the SharePoint environment.
Posted by Travel at 8:34 AM0comments
Re: စည်းလုံးညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာ
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ၊ ဟိုးအထက်ပိုင်းကိုရက်ကြာကြာခရီးထွက်နေခဲ့လို့၊ ကိုသောင်းနိူင်ဦးရဲ့စာကို၊ ချက်ခြင်းမပြန်ကြားနိူင်ခဲ့တာခွင့်လွှတ်စေလိုပါတယ်။ ကိုသောင်းနိူင်ဦးရဲ့အရင်စာကို၊ ကျနော်ပြန်လည်ပြီးသဘောထားပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့၊ ကိုသောင်းနိူင်ဦးဆီမှ၊ယခုလိုပြန်လည်နားလည်ပေးနိူင်တာကိုလဲ၊ လေးလဲလေးစားမိပါတယ်၊ ဂုဏ်လဲယူမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ နောက်ဆုံးမှာရေးထားခဲ့တဲ့၊ ကိုစိုးမိုးတို့လိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်. . . .ဆိုတာကြီးကတော့၊ ကျောချမ်းလိုက်တာဗျာ။ တကယ့်တကယ်မှာ၊ ဧည့်လမ်းညွှန်ဆိုတဲ့သူ၊ အငယ်/အကြီးအများစုဟာ၊ သူ့အလင်းနဲ့၊ သူ့အဆင်းနဲ့ရှိပြီးကြပြီးသားပါ၊ တော်ရုံသတ္တိ၊တော်ရုံအရည်အချင်းနဲ့တော့၊ ဘာသာခြား၊ လူမျိုးခြား၊ ယဉ်ကျေးမူ့မတူတဲ့၊ ဘယ်ခါကမှမတွေ့ဘူးခဲ့တဲ့၊ နိူင်ငံခြားသားတွေကိုဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုရမဲ့၊ဧည့်လမ်းညွှန်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြမယ်မထင်ပါ။ အားလုံးဟာ၊မပြောကြသေးတာပဲရှိပါလိမ့်မယ်၊ တနေ့နေ့မှာ၊အချိန်တန်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြောရဲဆိုရဲလာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြောလာကြဆိုလာကြလုပ်ကိုင်လာကြတဲ့အခါမှာ၊ ကျနော်တို့၊ ကိုသောင်းနိူင်ဦးတို့ထက်ပိုပြီး၊ ကြောက်ခမန်းလိလိ၊ အစွမ်းထက်မဲ့၊ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့၊ယုံကြည်ပြီး၊ကျနော်စာမှာရော၊ အခွင့်သင့်တဲ့အခါတိုင်းမှာရော၊ အားလုံးပါဝင်နိူင်ဘို့၊ ကျနော်တယောက်၊ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းပြောပြခဲ့တာပါ။အခက်အခဲ၊ဒုက္ခဆိုတာတွေကတော့၊ အချိန်တိုင်းမှာ၊ နေရာတိုင်းမှာရှိနေကြမှာပါပဲ၊ အခုကျနော်တို့၊ အကိုတို့ဘယ်လောက်ပဲရှင်းအောင်လုပ်ပေးပေမဲ့လဲ၊ သူ့အတိုင်းအတာ၊ သူ့အချိန်အခနဲ့သူ၊ အသစ်အသစ်သော၊ အခက်အခဲမျိုးစုံ၊ ဒုက္ခမျိုးစုံ၊ စိန်ခေါ်မူ့မျိုးစုံကတော့ရှိကိုရှိနေရမှာပါပဲ၊ သည်တော့ကျနော်အနေနဲ့ကတော့၊ အခက်အခဲတွေကိုကိုယ်စားပြုပြီးဖြေရှင်းပေးနေကြတာထက်၊ အားလုံးအားလုံးသောသက်ဆိုင်သူကြီးငယ်များကို၊ အတူလက်တွဲပြီးအတူဖြေရှင်းကြခြင်းသည်သာ၊ မျိုးဆက်တခုမှတခုကို၊ မှန်ကန်သောလက်ဆင့်ကမ်းပေးခြင်းလို့ထင်မိပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လဲ၊ အားလုံးပါဝင်စေခြင်ခဲ့တာပါ၊ ဘယ်သူတွေကိုတော၊ ဘာ့ကြောင့်ဆိုပြီး၊ ချန်ထားခဲ့တာ၊ ကျန်ရစ်ခဲ့တာမဖြစ်စေလိုပါ၊ သည်အတွက်လဲ၊ အချိန်ဆိုတာလိုအပ်သလို၊ ကောင်းသောစိတ်စေတနာနဲ့လုပ်တဲ့၊ အလုပ်များများလုပ်ပြစေလိုပါတယ်၊ သည်နေရာမှာ၊ ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လဲ၊ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်း၊ သင့်တော်တဲ့၊ ဖြစ်စဉ်နဲ့လဲညီညွှတ်ဘို့လဲလိုမယ်ထင်ပါရဲ့၊ ဒါကြောင့်လဲ၊ ကျနေ်ာထင်မိသမျှ၊ မြင်မိသမျှရေးမိပြောမိနေတာပါ၊ တိုက်ဆိုင်လို့၊ပြောပြလိုက်ပါအုံးမယ်၊ ကျနော်ပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာ၊ ဂျာနယ်တခုထဲက၊ ကြည့်လိုက်ရဖတ်လိုက်ရတဲ့၊ ကာတွန်းလေးတခုပါ၊ လူနှစ်ယောက်ပေါ့၊ တစ်ယောက်ကမြင်းကြီးစီးပြီး၊ အော်နေတာက၊ "ငါ့လှေငါထိုး၊ ပဲခူးရောက်ရောက်"တဲ့၊အဲ နောက်တယောက်ကတော့၊ "ငါ့မြင်းငါစိုင်းစစ်ကိုင်းရောက်ရောက်"တဲ့၊ လှေကြီးလှော်ပြီးအော်နေတာလေ၊ အဲသည်ကာတွန်းလေးကိုကြည့်ပြီး၊ ဟိုစဉ်းစားသည်စဉ်းစားပေါ့ဗျာ၊ သည်နောက်တော့၊ သိပ်ပြီး၊ ဘာမှမပြောရဲတော့သလိုလဲ၊ ခံစားမိတယ်ဗျာ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဘာကြီးစီးပြီး၊ ဘာကိုအော်လို့၊ ဘယ်ကိုသွားခြင်နေတာလဲဆိုတာကိုပဲ၊ စဉ်းစားမိနေလို့ပါ၊ ကိုသောင်းနိူင်ဦးရေ။ အရင်တုံးက၊ ကိုဝင်းဇော်ဦးတို့၊ ဦးပိန်ပတ်ဝန်းကျင်၊ သန့်ရှင်းရေးကိစ္စကိုပြောပြဘူးသေးတယ်၊ ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်မဲ့အစား၊ တာဝန်ရှိတဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ပြအကြံဥာဏ်ပေးတာကပိုသင့်တော်တယ်လို့ပေါ့၊ သည်လိုမဟုတ်ရင်တော့၊ သည်ကိစ္စက၊ ခုလိုပဲ၊ တခါတရံလာပြီးလုပ်အားပေးနေကြတာတွေနဲ့ပဲ၊ ပြီးစီးသွားမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်အားပေးတွေ၊ စေတနာနဲ့ချန်ထားပေးခဲ့တဲ့၊ အမိူက်ပစ်ရန်ဆိုတာကြီးကိုက၊ အနောက်အမှိုက်တခုထပ်တိုးလာသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့၊ မတိုက်ဆိုင်တာရှိသွားရင်တော့၊ ကန့်တော့ဗျာ၊ လေးစားလျှက်။
2011/9/23 Thaung Naing Oo <thaungnaingoo.007@gmail.com>
စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ရင်ခုံသံလေးတွေ ပြန်ကြားပေးခဲ့တာ ကျေးဇူးတင် လေးစားမိပါတယ်။ ကိုစိုးမိုးရဲ့စာလေးတွေ အသေအချာ ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ မှတ်သားစရာလေးတွေလည်းများစွပါပါတယ်။ အားလုံးသည် အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဖြစ်စေခြင်တာလေးတွေ စေတနာထားပြီးရေးထားတာလို့ ခံစားမိပါတယ်။ ဒီစာကိုဖတ်ရခြင်းအားဖြင့်လည်း ဧည့်လမ်းညွှန်များ အတွက်ရော မြန်မာနိုင်ငံဧည့်လမ်း ညွန်များအသင်း အပေါ်မှာပါ စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်းနဲ့ ပစ်ပယ်မေ့ဖျောက်မထားဘဲ စောင့်ကြည့်နေမှုရှိ ကြောင်း နားလည်ရပါတယ်။ ကိုစိုးမိုးတို့လို ကျွန်တော်တို့လို အားလုံး နားလည်သူတွေများလာရင် ပိုပြီး အောင်မြင်မှာပါ။ ကျွန်တော် အပါအဝင် အားလုံးကလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကိုယ်စွမ်းတဲ့ဘက်က နေ ပါဝင်ပြီး ဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြပါတယ်။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် ကျွန်တော့်အနေနဲ့က အတွေ့အကြုံတွေ ဗဟုသုတတွေ နဲနေပါသေးတယ်။ ဒီကနေ့အထိ သင်ယူဆဲ ကြိုးစားနေဆဲပါ။ အဲဒီလိုကြိုးစားသင် ယူလေ့လာရင်းနဲ့ပဲ ဒီအသင်းကြီး တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားဖြည့်ကူညီပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တတ်ကျွမ်းလှပြီလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အရွယ်အားဖြင့်ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ နောင် ၃.၄နှစ်ဆိုရင် နောက်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အတွက် နေရာဖယ်ပေးရတော့မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပုခုံးပြောင်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ရစ်ကြမည့် အနာဂတ်ကြယ် ပွင့်လေးတွေအတွက် အခိုင်အမာဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့ ချင်ပါတယ်။ နည်းကောင်းလမ်း မှန်လေးတွေကို အမွေအဖြစ် ချပေးခဲ့ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခရောက် ခဲ့သလို သူတို့လေးတွေ ဒုက္ခမရောက်စေချင်ပါဘူး။ ဒါဟာ ယခု လက်ရှိလုပ် ကိုင်ပေးနေတဲ့သူတွေ အားလုံးရဲ့ တူညီတဲ့ဆန္ဒတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ အများကြီးလုပ်ရဦးမှာပါ။ အခက် အခဲတွေ အများကြီး ကျော်ဖြတ်ရဦးမှာပါ။ အဲဒီလို ကျော်ဖြတ်နေစဉ်မှာ ဟာကွက်လေးတွေ လွဲမှားမှုလေး တွေဆိုတာ ရှိကောင်း ရှိလာနိုင်မှာပဲ။ အားလုံးသည် စေတနာအပြည့်နဲ့ လုပ်ကြတာဖြစ်သည့်အတွက် အကယ်၍ လွဲမှားမှုရှိခဲ့ရင်လည်း စေတနာ အမှားလေးတွေပဲ ဖြစ်မှာပါ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မရသေးပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကို ကြိုးစားပြီး ဆွဲတင်နေ ဆဲကာလမှာ ရောက်နေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အချို့သော ရသလေးတွေ ခံစားနေရပါပြီ။ မကြာခင် ရောက်တော့မယ်လို့လဲ ခံစားရတယ်။ ကူးပြောင်းဆဲကာလမှာ အခက်အခဲအခဲဆိုတာ အများကြီး ကြုံရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ် တဲ့အား လိုပါတယ်။ ထို့အတူပါပဲ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့အသင်း ကြီးဟာလည်း ကြီုးစားတည်ဆောက်ဆဲကာလ မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီနေ့(23.9.2011)နေ့ ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်းတည်ထောင်ခြင်း တစ်လတင်းတင်း ပြည့်တဲ့နေ့ပါ။ (၁)လသား အရွယ်ပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီလိုတည်ဆောက်ဆဲကာလမှာ ဓါးတောင်ကိုကျော်ပြီး မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်ရ မှာပါ။ ဒါပေ မဲ့ ဒါတွေက စိန်ခေါ်မှု (Challenge) တွေလို့မြင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မရရအောင် ကျော်ဖြတ်ကြရ မှာပါ။ များမ ကြာမီ အောင်မြင်တော့မယ်လို့လဲ လုံးဝ ယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ် တဲ့အင်အား လို နေပါတယ်။ ဒါက ဒီမိုကရေစီရဲ့သဘောတရားပါပဲ။ အားလုံးတက်ညီလက်ညီ လှော်ခတ်ကြမှ ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ကိုစိုးမိုးတို့လိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါဝင်ပြီးဦး ဆောင်လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သည်ထက်ပိုပြီးတော့ မြန်မြန်ချီတက်နိုင်မယ်လို့လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။
G- 5721 မန္တလေးဇုံ
23 .9. 2011
Posted by Travel at 7:48 AM0comments